Al-shabaab oo malaayiin doolar ka sameeya ka ganacsiga dhuxusha - Halbeeg News
Al-shabaab oo malaayiin doolar ka sameeya ka ganacsiga dhuxusha
KISMAAYO(HALBEEG)-Ciidamada Kenya oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee Midowga Afrika ee AMISOM ayaa ku guuldarreystay in ay joojiyaan ka ganacsiga sharci darrada ah ee dhuxusha Soomaaliya taas oo uu lacag farabadan uu ka sameeyo ururka Al-shabaab.
Ururka cunaqabateynta hubka iyo xayiraadda ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya u qaabilsan Qaramada Midoobay ayaa sheegay in Al-shabaab ay dhaqaale farabadan ka helaan dhuxusha laga dhoofiyo Koonfurta Soomaaliya.
Warbixin ay soo saareen ururkan ayaa lagu eedeeyay in AMISOM ay ka caawin waayeen baaritaan ay rabeen in ay ku sameeyaan maraakiib dhuxul ka dhoofineysay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee Jubbaland.
Ururka ayaa sheegay in ugu yaraan 7.5 milyan oo doollar ay Al-shabaab ku canshuuraan barahooda koontarool ee ku yaalla Gobolada Jubooyinka.
“Faaiidooyinkan la xiriira ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya, Al-shabaab waxa ay ka sameeyaan dhaqaale ka badan intii la qiyaasayay si ay usii wadaan howlaha iska caabinta” ayey sheegeen ururka korjoogtada iyo daba-galka cunaqabateynta hubka iyo xayiraadda ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya iyo Eritrea.
Maamul goboleedka Jubaland ayaa sidoo kale la sheegay in ay lacag ka sameeyaan ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya oo ay mamnuucday Qaramada Midoobay.
“Baaritaanno madax bannaan oo ay sameeyeen ururkan ayaa sheegaya in maamul goboleedka Jubaland uu lacag ka sameeyo ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya, waxa ayna loorkii ku canshuuraan wax ka badan 5 dollar taas oo ka dhigan in 15 milyan oo dollar ka sameeyaan ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya sanadkiiba” ayaa lagu yiri warbixintan.
Dowladda Soomaaliya oo soo dhoweysay xarigga Korneyl Gabre